TSL Products Showcases fanavaozam-baovao amin'ny alàlan'ny Solika Audio Monitorin Solika sy Rafitra momba ny fanaraha-maso amin'ny NAB NY 2019 - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcaster ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » TSL Products Showcases fanavaozam-baovao amin'ny fantsom-peo Audio Monitorin Solutions ary Rafitra fanaraha-maso Broadcast any amin'ny NAB NY 2019
TSL Products Showcases fanavaozam-baovao amin'ny fantsom-peo Audio Monitorin Solutions ary Rafitra fanaraha-maso Broadcast any amin'ny NAB NY 2019
New York, Oktobra 7, 2019 - TSL Products, mpamorona mpamorona sy mpamokatra vahaolana amin'ny alàlan'ny fantsom-pahalalana momba ny onjam-peo, dia hanasongadiny ny fanatanterahana feo sy fanaraha-maso farany ao amin'ny NAB NY 2019 (Booth N155). Ny marika dia manohy manohy ny vahaolana hamerenany ny fanovana ny mpanjifany ary ny fifindran'ireo alàlan'ny IP miasa. TSL dia hanasongadina ny fanavaozana amin'ireo tolotra fanaraha-maso ao aminy, anisan'izany ny sehatra SAM-Q, PAM-IP ary ireo andalana MPA1. Ankoatr'izay, haneho fanavaozana amin'ireo tolotra fanaraha-maso efa ela niandany izany, ary koa ny IP Control Buddy, ny isan-karazany amin'ny lafiny rehetra any amin'ny Any Any Interface Boxes sy ny Flashboard.
TSL ihany koa dia hanolotra fanavaozana amin'ny tsipika PAM-IP sy ireo fampiasa andrana ivelan'ny fanaraha-maso audio sy horonan-tsary. Ny PAM-IP dia manohy mametraka ny fenitra ho an'ny fanaraha-maso ara-peo 2022-6 sy 2110. Ny fampiasa azy dia misy ny refy fanamafisam-peo, fandrefesana metering tanteraka ary fanaraha-maso marobe. Fantatra ny maha-zava-dehibe ny fifehezana ny rindrambaiko eo amin'ireo fotodrafitrasa IP, ny mpanjifa dia afaka misafidy na 'In-Band' na 'Out-of-Band' hifehy miaraka amin'ny fanaraha-maso PAM-IP misy azy. Amin'ny alàlan'ny rafitra fanaraha-maso an'ny antoko TSL na 3rd, ny ST-2110 sy ny ST-2022-6 famandrihana multicast amin'ny PAM-IP dia azo faritana amin'ny fampiasana Ember +, NMOS na TSL's RESTful API protocol. Aseho an-tsehatra koa any amin'ny NAB NY no famoahana farany ny fisian'ny fanaraha-maso ara-peo TSL's MPA1, anisan'izany ny fanatsarana ny fehezam-peo ho an'ny MPA1-SOLO-MADI ary MPA1-SOLO-DANTE, ary ireo lohahevitra momba ny loham-baravarana hafa ho an'ny MPA1-MIX-MADI. Manolotra ny fahaiza-mifehy tsara amin'ny alalàn'ny SNMP ho an'ny rehetra fanaraha-maso audio audio MPA1. Ireo mpanara-maso azo itokisana sy madiodio dia ahafahan'ny mpampiasa farany manara-maso ny audio miaraka amin'ny fahatokisana ary amin'ny 100mm lalina, dia mety indrindra ho an'ny rindranasa izay misy ny vidin'ny habaka, toy ny fonosana fiaramanidina ary ny kamiao OB.
Amin'ny lafiny fanaraha-maso, TSL dia hampiseho fiasa vaovao isan-karazany ao anatin'ny fifehezana master, playout ary fifindrana ho ampahany amin'ireo tolotra mifehy fatratra azy noho ny TSL's Flex Network, natolotry ny Fanaraha-maso ny DNF. Ireo fanavaozam-baovao ireo dia misy ny fampidirana MOS miaraka amin'ny ENPS sy iNews hanamorana ny fampandehanana ny famokarana trano fivoahan'ny bilaogera amin'ny alàlan'ny fandraisan'ny mpampiasa azy ireo hifehy ireo fitaovana saro-pantarina izay ianteherany. Ho an'ny automatisation playout, ny mpanjifa izao dia afaka amidy lafo sy mora ary mamorona rafitra automatique na backup / tertiary, miaraka amin'ny fanaraha-maso tsotra sy azo antoka amin'ny fitaovana fanaovana playout sy sary ho an'ny fandaharana mivantana. Ho fanampin'izay, ny mpampiasa dia afaka mitantana, mifamadika ary mizara baiko SCTE amin'ny fomba miavaka na amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso automatique miaraka amin'ny fanaraha-maso sy fampandrenesana fotoana tena izy rehefa misy ny hetsika.
TSL koa dia hanasongadinana ny velarana sy ny fifandraisana amin'ny ankapobeny maneran-tany, ao anatin'izany ny IP Control Buddy, ary koa ny tsipika amin'ny lafiny rehetra any amin'ny Anywhere Interface (AIBs). IP Control Buddy an'ny TSL dia rafitra mahery vaika nefa mifehy izay fitaovana mifehy ny GPI / O-, Serial- ary IP afaka mampiasa azy. Mikasika ny bokotra iray ka hatramin'ny efatra, ny IP Control Buddy dia afaka manao hetsika tsotra amin'ny 'off / off' na manetsika ny salvos saro-pady, ary ny habeny mifangaro dia mahatonga azy ho tonga lafatra ho an'ny kitapo flyaway sy asa famokarana haingana. Ny andian-tsarintany AIB an'ny orinasa dia natao manokana ho an'ireo faritra amin'ny tsena fampielezam-peo A / V, radio, indostrialy ary fahitalavitra ary mamela ireo mpampiasa hanangana rafitra sy hahavita asa tsara indrindra tsy misy fanatanterahana programa akory. Ho an'ny fitantanana fitaovana sy fanamafisana ny interface tsara, ny AIB dia manolotra hatramin'ny 16 GPI / Os ary lalana mifehy ny fitaovana maro, miaraka amin'ny AIB-4 koa dia manome Ethernet, 2-DTMF ary dial-up modem. Ny fitaterana GPIB AIB sy ny haino aman-jotra On-Air dia mankany an-tsaha, na aiza na aiza ilainao izy ireo - manerana ireo tanàna, fanjakana ary kontinanta - lavitra. Ny fanitsiana ho an'ny fampiharana fanaraha-maso sy fanaraha-maso dia mora kokoa amin'ny 'browser-free' programa.
Ankoatr'izay, ny orinasa dia nahatsapa ny filan'ny mpanjifa mitombo amin'ny sary an-tsaina ny fampahalalana momba ny fivezivezena miasa ary nanamboatra FlashBoard hampiditra tsimoramora amin'ny TSL na rafitra hafa mifehy ny antoko fahatelo. Ao amin'ny NAB NY, TSL dia hampiseho ny fampidirana ny endri-javatra marobe amin'ny interface tsara FlashBoard, ao anatin'izany ny rafitra sy ny famantaranandro izao tontolo izao, ny famokarana avo lenta, ny mari-pahaizana an-tsokosoko ary ny fanamoriana hazavana, ny fanaovana marika eo amin'ny efijery, ny fampisehoana atiny amin'ny Internet ary ny horonan-tsary. .
Nandritra ny taona 30, ny TSL dia niasa mivantana tamin'ireo mpanolotra fandaharana matihanina sy mpamorona matihanina manerantany mba hamolavola, hamokarana ary hivarotana vahaolana samihafa momba ny workflow izay mikendry ny hanatsara ny asa ao amin'ny fahitalavitra, cable, zanabolana, IPTV ary indostria IT. Ny fahaiza-mitantana amin'ny fanaraha-maso an-tserasera, ny rafitra fanaraha-maso an-tserasera ary ny fitantanana angovo, TSL dia manome antoka fa ny vahaolana dia manome fahafaham-po sy mandany ny fepetra ara-barotra ara-barotra, ara-teknika ary ara-operandika izay misy amin'ny drafitra ara-teknika sy ara-drafitrasa mba hanampy ny mpanjifany handany vola, hamerina ny vola miditra sy hivezivezy.
Audio fampitana injeniera fampitana Engineering Control System Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor fampidirana ip MPA1 NAB NY 2019 Fampitana Outside kamiao Pam-IP SAM-Q Spears & Arrows TSL Products TV Technology TVU Networks Ultra HD Forum Video injeniera Workflows	2019-10-07
Previous: Ny Telestream dia manasongadina ny filaharan'ireo vokatra sy serivisy farany indrindra avy amin'ny Ingest mankany amin'ny fandefasana azo antoka ao amin'ny NAB NY
Next: RBS misafidy rafitra Pebble Beach ho an'ny automation manerana ny sehatra rehetra